ကမ်ဘာပျေါက ဆနျစပါး စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု အမြားဆုံးနိုငျငံ ၇ နိုငျငံ - Thutazone
ကမ်ဘာပျေါက ဆနျစပါး စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု အမြားဆုံးနိုငျငံ ၇ နိုငျငံ
ဆနျဆိုတာကတော့ မွကျမြိုးစိတျဝငျအစအေ့ဆနျဖွဈပွီး Oryza sativa(အာရှဆနျမြိုးစိတျ)၊ Oryza glaberrima (အာဖရိကဆနျမြိုးစိတျ)ဆိုပွီးရှိကွပါတယျ။ အဓိက ဆနျမြိုးစိတျကွီး (၂)မြိုးသာရှိနတေယျဆိုပမေယျ့ ယငျးမြိုးစိတျတှကေိုပဲထပျမံခှဲခွားပွီး ကမ်ဘာတလှားမှာဆနျအမြိုးအစားပေါငျး (၄၀၀၀၀)ကြျောလောကျအထိကို ရှိနပွေနျပါတယျ။ ထုတျလုပျတဲ့ဆနျရဲ့(၉၅)ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အထိကိုလူသားတှစေားသုံးကွတယျလို့သိရပွီး ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ ထကျဝကျဟာ ဆနျ(ထမငျး) အဓိက စားသုံးသူတှဖွေဈပါတယျ။
အဓိကအားဖွငျ့တော့ အာရှ ၊ အာဖရိက နဲ့ တောငျအမရေိကဒသေတှေ မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဆနျကို ခကျြပွီးထမငျးအဖွဈနှဈသကျရာဟငျးလြာတှေ နဲ့တှဲဖကျစားသုံးကွလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီနရောမှာမြှဝပေေးခငျြတာကတော့ ကမ်ဘာထိပျတနျး ဆနျစပါး စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု အမြားဆုံးဖွဈတဲ့ နိုငျငံ ၇ ခုရဲ့ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လှနျခဲ့သော နှဈရာပေါငျးမြားစှာကတညျးက ဆနျစပါးကို အဓိက စိုကျပြိုး စားသုံးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈမဖွဈမီ ကာလကတညျးက မွနျမာနိုငျငံဟာ ဆနျစပါးတငျပို့မှု အမြားဆုံး နိုငျငံစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာလညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ တောငျသူလယျသမားတှဟော အခကျအခဲမြိုးစုံ ရငျဆိုငျနရေပမေယျ့ ဆနျစပါး စိုကျပြိုးတငျပို့မှု စာရငျးမှာ မွနျမာဟာ နံပါတျ ၇ နရောမှာ ရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ စိုကျပြိုးရေးဟာ မွနျမာ့စီးပှားရေးထုတျကုနျကဏ်ဍ စုစုပေါငျးရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံခနျ့ကို ရရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှဈစာရငျးအရ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဆနျစပါးစိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု တနျခြိနျစုစုပေါငျး ၁၃.၂ သနျးခနျ့ရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ပွညျနယျအားလုံးဟာ ဆနျစပါးကို စိုကျပြိုးကွပါတယျ။ ထိုငျးဆနျဆိုတဲ့ အမညျနဲ့ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျမှာ အခိုငျအမာကိုရပျတညျနတောကိုတှရေ့မှာဖွဈပွီး ဂပြနျနိုငျငံတခုတညျးကိုပငျ နှဈစဉျ ဆနျတနျခြိနျ(၁၀၀၀၀၀)လောကျ တငျပို့နတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံကတော့ထိုငျးကတငျ ပို့တဲ့ဆနျကို ခရကျကာနဲ့ ဝိုငျတှထေုတျလုပျရာမှာ အဓိကထားသုံးစှဲပါတယျ။ထိုငျးအစိုးရကတော့၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး ပွညျပနိုငျငံတှကေို ဆနျတနျခြိနျ(၇)သနျးကနေ(၈)သနျးကွားထုတျလုပျတငျပို့နိုငျဖို့ ရညျမှနျးထားကွပါတယျ။ ပွညျပကိုဆနျထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ဝငျငှကေ တငျထိုငျးနိုငျငံရဲ့နှဈစဉျ GDP တနျဖိုးငှရေဲ့ (၁၅)ရာခိုငျနှုနျးအထိကို နရောယူထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှဈမှာဆိုရငျ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ဆနျထုတျလုပျမှုဟာ မကျဒရဈတနျခြိနျ(၂၀.၃၄)သနျးအထိကိုရှိ နတောကိုတှရေ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးဆနျထုတျလုပျတဲ့စာရငျးမှာတော့ အရှတေောငျအာရှက ဗီယကျနမျဟာလညျး တခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။စိုကျပြိုးသီးနှံကောငျးစှာဖွဈထှနျးတဲ့မဲခေါငျမွဈဝကြှနျးပျေါဒသေမွဈနီ မွဈမွောကျဘကျပိုငျးဒသေနဲ့နိုငျငံတောငျပိုငျးဒသေတှမှောလယျယာမွမြေားစှာစိုကျပြိုးကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့မဲခေါငျမွဈဝကြှနျးပျေါဒသေတဝိုကျမှာရှိတဲ့ပွညျနယျအားလုံးမှာနထေိုငျကွတဲ့လူဦး ရရေဲ့ (၈၀)ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ဟာလယျသမားတှဖွေဈကွပါတယျ။ ဗီယကျနမျနိုငျငံစိုကျပြိုးမွရေဲ့(၈၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာဆိုရငျစပါးစိုကျခငျးတှသောဖွဈပွီး (၂၀၁၈/၂၀၁၉)ခုနှဈကဆိုရငျဆနျမကျ ဒရဈတနျခြိနျ(၂၇.၇၇)လောကျအထိကိုထုတျလုပျနိုငျခဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ယငျးအနကျကတနျ ခြိနျ(၆.၆.)တနျကိုအိမျနီးခငျြး ဖိလဈပိုငျ၊တရုတျနဲ့ အာဖရိကတိုကျနိုငျငံအခြို့ကိုတငျပို့ရောငျးခြ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှဈက ဘင်ျဂလားဒရှေိ့နိုငျငံဟာ ဆနျတနျခြိနျပေါငျး(၃၄.၉၁)သနျးအထိ ထုတျလုပျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ဆနျစပါးဟာဆိုရငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအတှကျ အဓိကစားသောကျကုနျဖွဈသလိုတိုငျးပွညျ GDP တနျဖိုးရဲ့တဝကျလောကျဟာလညျးဆနျစပါး ရောငျးဝယျရေးကနရေရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံစုစုပေါငျးဝငျငှရေဲ့(၆)ပုံ (၁) ပုံဟာဆိုရငျဆနျစပါးလုပျငနျးကနရေရှိနတောကိုတှရေ့မှာဖွဈပွီး ကမ်ဘာဈေးကှကျအထိကိုထိုး ဖောကျဝငျရောကျနိုငျတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဟာကမ်ဘာအရပျရပျကိုဆနျ ထုတျလုပျရောငျးခနြတောဖွဈပွီး (၂၀၁၇)ခုနှဈကဆိုရငျ သိရိလင်ျကာတနိုငျငံတညျးကိုပဲ ဆနျတနျခြိနျ (၅၀၀၀၀)အထိရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံရဲ့ဆနျထှကျရှိရာအမြား ဆုံးဒသေတှကေတော့ Aman ၊ Boro ၊Aus တို့ဖွဈပါတယျ။
အရှတေောငျအာရှက အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံဟာဆိုရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာတတိယမွောကျဆနျထုတျလုပျမှု အမြားဆုံးနိုငျငံတခုအဖွဈရှိနပေါတယျ။ နိုငျငံရဲ့ဆနျစပါးစိုကျပြိုးရာအမြားဆုံးဒသေတှကေတော့ ဂြာဗားကြှနျး၊စူမားတွားကြှနျးတို့ဖွဈပွီး နိုငျငံရဲ့ဆနျစပါးထှကျရှိနှုနျးရဲ့(၆၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျကို တော့ စူမားတွားကြှနျးကနထှေကျရှိပါတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံရဲ့သီးနှံစိုကျပြိုးသူ(၇၇)ရာခိုငျနှုနျး လောကျဟာလယျသမားတှဖွေဈကွပွီး စိုကျပြိုးခြိနျအမှနျရိတျသိမျးခြိနျအမှနျနဲ့ နှဈစဉျအကြိုးအမွတျမြားစှာပိုငျဆိုငျရလရှေိ့ပါတယျ။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှဈကဆိုရငျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံဟာ ဆနျမကျဒရဈတနျခြိနျ (၃၆.၇၀)လောကျကိုထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံရဲ့ဆနျစပါးထုတျလုပျငနျးကို အဓိကနရောကနမွေငျ့တငျပေးနသေူတှကေတော့ လယျယာမွဧေကမြားစှာပိုငျဆိုငျတဲ့ လယျပိုငျ ရှငျကွီးတှမေဟုတျဘဲ တနိုငျတပိုငျစိုကျပြိုးလုပျကိုငျကွသူတှသောဖွဈတယျလို့ မှတျတမျးတှေ အရသိရပါတယျ။ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံရဲ့(၉၀)ရာချိုငျနှုနျးသောဆနျစပါးထုတျကုနျတှကေတော့တနိုငျတပိုငျစိုကျပြိုးသူလယျသမားတှရေဲ့လုပျငနျးခှငျကသာရရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှဈက အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ဆနျစပါးထုတျလုပျမှုအရအေတှကျဟာမကျဒရဈတနျ၁၁၆ သနျးကြျောအထိကိုရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အနောကျဘနျဂေါဒသေကတော့ အိန်ဒိယရဲ့အဓိက ဆနျစပါးထှကျရှိရာပွညျနယျအဖွဈရှိနပွေီး၂၀၁၆ခုနဈကဆိုရငျ ပွညျနယျတှငျးရှိနတေဲ့စိုကျပြိုးမွေ ဟတျတာသနျးပေါငျး ၅.၄၆ ကနေ ဆနျတနျခြိနျသနျး ၁၅.၇၅ အထိကိုထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဘားဈမာတီဆနျထုတျလုပျရောငျးခမြှုမှာတော့ အိန်ဒိယဟာကမ်ဘာဈေးကှကျဦးဆောငျနိုငျတဲ့အထိ ထုတျလုပျမှုအားကောငျးခဲ့ပွီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှဈအတှငျးကနဆေိုရငျ ဘားဈမာတီဆနျတနျ ခြိနျ(၄.၄.)သနျးလောကျအထိကိုပွညျပနိုငျငံတှကေိုတငျပို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အိန်ဒိယရဲ့နှဈစဉျဆနျ ထုတျလုပျနိငျတဲ့ပမာဏကတော့ဆနျတနျခြိနျမကျဒရဈတနျသနျးပေါငျး(၁၀၀)လောကျကိုရှိနပွေီး နိုငျငံလူဦးရရေဲ့ (၆၅)ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာဆနျစားသုံးသူတှဖွေဈကွပါတယျ။ အိန်ဒိယဟာနိုငျငံရဲ့ အဓိကဝငျငှကေိုဆနျထုတျလုပျရောငျးခမြှုကနရေရှိနသေလိုအိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့လယျယာစိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးလုပျကိုငျသူဦးရဟော သနျး(၅၀)ကြျောအထိကိုရှိနပေါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဆနျထုတျလုပျမှုအမြားဆုံးနိုငျငံကတော့ တရုတျပွညျသူသမ်မတနိုငျငံဖွဈပွီး ကှဲပွားတဲ့အပငျ မြိုးစိတျ(၂)ခုကနေ ပငျပှားတဲ့ ကမ်ဘာအထမဆုံးသော ဟိုကျဒရကျဆနျကိုအောငျမွငျစှာထုတျလုပျနိုငျခဲ့တာကလညျးတရုတျနိုငျငံသာဖွဈပါတယျ။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှဈမှာဆိုရငျတရုတျနိုငျငံရဲ့ ဆနျထုတျလုပျမှုပမာဏဟာ မကျဒရဈတနျသနျးပေါငျး (၁၄၈)သနျးအထိကိုရှိနပေါတယျ။ နိုငျငံရဲ့ အဓိကလယျယာစိုကျပြိုးဒသေတှကေတော့ ယနျဇီမွဈနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ Jiangsu ၊ Anhui ၊ Hubei နဲ့ Sichuanပွညျနယျတှဖွေဈကွပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံလယျယာမွတှေရေဲ့(၉၅)ရာခိုငျနှုနျး လောကျဟာ မိရိုးဖလာစိုကျပြိုးနညျးစဉျတှအေတိုငျးသာစိုကျပြိုးကွလရှေိ့ပါတယျ။ ယခုနောကျပိုငျးမှာတော့ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုဖွဈစဉျတှေ၊ လယျယာမွလေုပျသားရှားပါးတာတှေ နဲ့ ဓာတုပစ်စညျးအဆမတနျသုံးစှဲလရှေိ့တဲ့ဖွဈစဉျတှဟော တရုတျလယျယာမွတှေအေတှကျ မြားစှာ သကျရောကျမှုရှိတာကွောငျ့ တရုတျအစိုးရအနနေဲ့ပွနျလညျပွုပွငျရေးနညျးစဉျတှကေိုပွုလုပျဖို့ လို အပျလာတဲ့အခွအေနမှောရှိနပေါပွီ။ တရုတျနိုငျငံလူဦးရရေဲ့ (၆၅)ရာခိုငျနှုနျးရဲ့ အဓိကအစားအစာဟာလညျး ထမငျးပဲဖွဈပါတယျ။
ကမ္ဘာပေါ်က ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံ
ဆန်ဆိုတာကတော့ မြက်မျိုးစိတ်ဝင်အစေ့အဆန်ဖြစ်ပြီး Oryza sativa(အာရှဆန်မျိုးစိတ်)၊ Oryza glaberrima (အာဖရိကဆန်မျိုးစိတ်)ဆိုပြီးရှိကြပါတယ်။ အဓိက ဆန်မျိုးစိတ်ကြီး (၂)မျိုးသာရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ယင်းမျိုးစိတ်တွေကိုပဲထပ်မံခွဲခြားပြီး ကမ္ဘာတလွှားမှာဆန်အမျိုးအစားပေါင်း (၄၀၀၀၀)ကျော်လောက်အထိကို ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ဆန်ရဲ့(၉၅)ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိကိုလူသားတွေစားသုံးကြတယ်လို့သိရပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ဟာ ဆန်(ထမင်း) အဓိက စားသုံးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့်တော့ အာရှ ၊ အာဖရိက နဲ့ တောင်အမေရိကဒေသတွေ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ကို ချက်ပြီးထမင်းအဖြစ်နှစ်သက်ရာဟင်းလျာတွေ နဲ့တွဲဖက်စားသုံးကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာမျှဝေပေးချင်တာကတော့ ကမ္ဘာထိပ်တန်း ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံ ၇ ခုရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက ဆန်စပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုး စားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီ ကာလကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆန်စပါးတင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ အခက်အခဲမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးတင်ပို့မှု စာရင်းမှာ မြန်မာဟာ နံပါတ် ၇ နေရာမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေးထုတ်ကုန်ကဏ္ဍ စုစုပေါင်းရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံခန့်ကို ရရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တန်ချိန်စုစုပေါင်း ၁၃.၂ သန်းခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်အားလုံးဟာ ဆန်စပါးကို စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ထိုင်းဆန်ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ အခိုင်အမာကိုရပ်တည်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတခုတည်းကိုပင် နှစ်စဉ် ဆန်တန်ချိန်(၁၀၀၀၀၀)လောက် တင်ပို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ထိုင်းကတင် ပို့တဲ့ဆန်ကို ခရက်ကာနဲ့ ဝိုင်တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ အဓိကထားသုံးစွဲပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ဆန်တန်ချိန်(၇)သန်းကနေ(၈)သန်းကြားထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။ ပြည်ပကိုဆန်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ဝင်ငွေက တင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ် GDP တန်ဖိုးငွေ၇ဲ့ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းအထိကို နေရာယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်မှာဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆန်ထုတ်လုပ်မှုဟာ မက်ဒရစ်တန်ချိန်(၂၀.၃၄)သန်းအထိကိုရှိ နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဆန်ထုတ်လုပ်တဲ့စာရင်းမှာတော့ အရှေတောင်အာရှက ဗီယက်နမ်ဟာလည်း တခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးသီးနှံကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းတဲ့မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမြစ်နီ မြစ်မြောက်ဘက်ပိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလယ်ယာမြေများစွာစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတဝိုက်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူဦး ရေရဲ့ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာလယ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမြေရဲ့(၈၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဆိုရင်စပါးစိုက်ခင်းတွေသာဖြစ်ပြီး (၂၀၁၈/၂၀၁၉)ခုနှစ်ကဆိုရင်ဆန်မက် ဒရစ်တန်ချိန်(၂၇.၇၇)လောက်အထိကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယင်းအနက်ကတန် ချိန်(၆.၆.)တန်ကိုအိမ်နီးချင်း ဖိလစ်ပိုင်၊တရုတ်နဲ့ အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံအချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိနိုင်ငံဟာ ဆန်တန်ချိန်ပေါင်း(၃၄.၉၁)သန်းအထိ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်စပါးဟာဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွက် အဓိကစားသောက်ကုန်ဖြစ်သလိုတိုင်းပြည် GDP တန်ဖိုးရဲ့တဝက်လောက်ဟာလည်းဆန်စပါး ရောင်းဝယ်ရေးကနေရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံစုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့(၆)ပုံ (၁) ပုံဟာဆိုရင်ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကနေရရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိကိုထိုး ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဟာကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကိုဆန် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး (၂၀၁၇)ခုနှစ်ကဆိုရင် သိရိလင်္ကာတနိုင်ငံတည်းကိုပဲ ဆန်တန်ချိန် (၅၀၀၀၀)အထိရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ဆန်ထွက်ရှိရာအများ ဆုံးဒေသတွေကတော့ Aman ၊ Boro ၊Aus တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေတောင်အာရှက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယမြောက်ဆန်ထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံတခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရာအများဆုံးဒေသတွေကတော့ ဂျာဗားကျွန်း၊စူမားတြားကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးထွက်ရှိနှုန်းရဲ့(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို တော့ စူမားတြားကျွန်းကနေထွက်ရှိပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့သီးနှံစိုက်ပျိုးသူ(၇၇)ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဟာလယ်သမားတွေဖြစ်ကြပြီး စိုက်ပျိုးချိန်အမှန်ရိတ်သိမ်းချိန်အမှန်နဲ့ နှစ်စဉ်အကျိုးအမြတ်များစွာပိုင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပါတယ်။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်ကဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဆန်မက်ဒရစ်တန်ချိန် (၃၆.၇၀)လောက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးထုတ်လုပ်ငန်းကို အဓိကနေရာကနေမြင့်တင်ပေးနေသူတွေကတော့ လယ်ယာမြေဧကများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ပိုင် ရှင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘဲ တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေ အရသိရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့(၉၀)ရာခို်င်နှုန်းသောဆန်စပါးထုတ်ကုန်တွေကတော့တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးသူလယ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကသာရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက်ဟာမက်ဒရစ်တန်၁၁၆ သန်းကျော်အထိကိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘန်ဂေါဒေသကတော့ အိန္ဒိယရဲ့အဓိက ဆန်စပါးထွက်ရှိရာပြည်နယ်အဖြစ်ရှိနေပြီး၂၀၁၆ခုနစ်ကဆိုရင် ပြည်နယ်တွင်းရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးမြေ ဟတ်တာသန်းပေါင်း ၅.၄၆ ကနေ ဆန်တန်ချိန်သန်း ၁၅.၇၅ အထိကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘားစ်မာတီဆန်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုမှာတော့ အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာဈေးကွက်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အထိ ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းခဲ့ပြီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်းကနေဆိုရင် ဘားစ်မာတီဆန်တန် ချိန်(၄.၄.)သန်းလောက်အထိကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့နှစ်စဉ်ဆန် ထုတ်လုပ်နိင်တဲ့ပမာဏကတော့ဆန်တန်ချိန်မက်ဒရစ်တန်သန်းပေါင်း(၁၀၀)လောက်ကိုရှိနေပြီး နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ (၆၅)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဆန်စားသုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယဟာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကဝင်ငွေကိုဆန်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကနေရရှိနေသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဦးရေဟာ သန်း(၅၀)ကျော်အထိကိုရှိနေပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံကတော့ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကွဲပြားတဲ့အပင် မျိုးစိတ်(၂)ခုကနေ ပင်ပွားတဲ့ ကမ္ဘာအထမဆုံးသော ဟိုက်ဒရက်ဆန်ကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခုနှစ်မှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာ မက်ဒရစ်တန်သန်းပေါင်း (၁၄၈)သန်းအထ်ိကိုရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အဓိကလယ်ယာစိုက်ပျိုးဒေသတွေကတော့ ယန်ဇီမြစ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Jiangsu ၊ Anhui ၊ Hubei နဲ့ Sichuanပြည်နယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံလယ်ယာမြေတွေရဲ့(၉၅)ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဟာ မိရိုးဖလာစိုက်ပျိုးနည်းစဉ်တွေအတိုင်းသာစိုက်ပျိုးကြလေ့ရှိပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေ၊ လယ်ယာမြေလုပ်သားရှားပါးတာတွေ နဲ့ ဓာတုပစ္စည်းအဆမတန်သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ တရုတ်လယ်ယာမြေတွေအတွက် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့် တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးနည်းစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့ လို အပ်လာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ (၆၅)ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ အဓိကအစားအစာဟာလည်း ထမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။